Kitapo lamba grunge maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Kitapo lamba grunge maimaim-poana
Ny firafitra dia iray amin'ireo singa mampisy fahasamihafana tanteraka. Indrindra amin'ny fomba toy ny Retro, gothika, steampunk na grunge, ireo karazana antsipiriany ireo dia tena zava-dehibe marina satria ny estetika an'ny harafesina, voaloto na antitra dia manome kilalao sy fanehoan-kevitra be dia be. Izany no antony androany hitondrako fonosana mahaliana be miaraka amina karazana miloko sy lo mihintsana mba hanananao loharano tsara rehefa mampivelatra an'io karazana tetikasa io ianao. ary manitatra kely ny tahirin'ny loharanonao manokana ianao. Ireo firafitra izay entiko anao ireo dia misy vahaolana 300 dpi ary azo ampiasaina amin'ny fomba mahomby amin'ny karazana tetik'asa famolavolana sary sy tranonkala ho lasa fotony.
Aiza no ahafahanao misintona azy? Avy amin'ity rohy ity izay homeko anao eto ambany. Mivantana ny fampidinana, tsy hitondra anao any amin'ny mpizara na zavatra hafa toa izany. Fantatro fa maro aminareo no nanana olana tamin'ny mpizara 4shared ka manandrana tsy mampiasa azy io aho manomboka izao satria marina fa tato ho ato dia tototry ny dokambarotra tsy ilaina ary misy hadisoana kely azontsika atao ny misintona rindranasa na viriosy tsy ilaina. Na izany na tsy izany, raha misy olana rehefa miditra na misintona ny atiny dia mila miteny amiko fotsiny ianao dia hamaha ny olana aho.
Ity ny rohy fampidinana: Kitapo fonosana grunge-style ho an'ny Adobe Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Textures » Kitapo lamba grunge maimaim-poana
Ale hernan dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ny firafitra !! Tiako izy ireo!
Valiny tamin'i Ale Hernan
Faly aho fa nahasoa anao izy ireo. Mirary ny soa indrindra!!
ricardo cardenas dia hoy izy:
tena tsara ny lamba, misaotra
Mamaly an'i Ricardo cardenas
Boky tena ilaina 10 momba ny varotra sy ny doka
Boudoir Photography: toro-hevitra hampiroboroboana ny sary fakana sary erika voalohany anao